Vivo Unveils the all-new ‘V9’ AI-Powered FullView™ Display Smartphone to Myanmar – LYCA COMMUNICATIONS
Vivo Unveils the all-new ‘V9’ AI-Powered FullView™ Display Smartphone to Myanmar
Enabling the Perfect Shot, Perfect View and an AI-Powered Experience for Young Consumers
Yangon – April 28, 2018 – Vivo today celebrated the launch of its all-new V9 smartphone at Melia Hotel in Yangon, featuring Vivo’s FullViewTM Display and 90% screen-to-body ratio that delivers AI-powered perfect shots. The V9 is designed with the ultimate sleek and stylish smartphone that can take the “perfect shot” and provide the “perfect view” through the power of AI.
Following Vivo’s recent announcements around 5G and In-Display Fingerprint Scanning Technologies, Vivo’s V9 uses advanced machine learning to provideaunique AI-powered mobile experience that enhances multiple features such as AI Face Beauty, AI Smart Engine and AI Selfie Lighting, etc.
The Vivo V9’s AI Face Beauty is trained usingacomprehensive database of almost one million facial images. This allows the V9’s AI to detect the age, sex, skin texture and skin tone of the subject as well as the lighting environment. It can then apply enhancements in line with the preferences of local users. Other AI photography features include the new AI Selfie Lighting, which algorithm transforms the original 2D photo intoa3D model to process the light authentically and artistically, helping users create their masterpieces.
Vivo has improved on the previous generation’s facial unlocking technology with AI Face Access, which detects the reflection of natural skin and the subtle movements of the face to further reduce the possibility of unlocking when shown photos or videos. The V9’s AI Attention Sensing also recognizes when you’re looking at the phones to keep disruptions toaminimum by automatically reducing the volume of message alerts, incoming calls and alarms.
“V9 represents our understanding of consumer’s need for their mobile camera to automatically create the ‘perfect shot’ in any scenario. We are excited to introduce the V9’s AI power to young consumers in Myanmar,” U Htun Htun Win, Digital PR Manager of Vivo Mobile Myanmar Co., Ltd.
“With AI playingakey role, we are confident that we can inspire and empower more consumers globally to express themselves by making the ‘perfect shot’ easier than ever to take, while the FullViewTM display provides consumers with the ‘perfect view’ to experience their photographic moments of self-expression,” he added.
V9 will be available in Myanmar in Pearl Black and Gold at 399,000 Kyats.
More information about our innovative smartphones can be found at http://www.vivo.com.
Vivo မှ AI စွမ်းအင်သုံး FullViewTM Display V9 အား မြန်မာဈေးကွက်အတွင်း စတင်မိတ်ဆက်
“ပြီးပြည့်စုံသည့်ရိုက်ချက်နှင့် ပြီးပြည့်စုံသည့် မြင်ကွင်းတွေကို အကောင်းဆုံး ခံစားရရှိနိုင်စေပြီး လူငယ်များအတွက် AI ဉာဏ်ရည်တု အတွေ့အကြုံကို အပြည့်အဝ ပေးစွမ်းနိုင်”
ရန်ကုန်၊ ဧပြီလ (၂၈)ရက်၊ ၂၀၁၈ခုနှစ် – Vivo သည် ၎င်း၏ထုတ်ကုန်သစ်ဖြစ်သည့် V9 စမတ်ဖုန်း မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့ ရန်ကုန်မြို့ Melia ဟိုတယ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ V9 သည် FullViewTM Display နှင့် 90% screen-to-body အချိုးဖြစ်ပြီး၊ ဉာဏ်ရည်တု AI စွမ်းအင်နဲ့အတူ ပြီးပြည့်စုံသည့် ရိုက်ချက်ကို ရယူနိုင်သော မျိုးဆက်သစ် စမတ်ဖုန်း အမျိုး အစား တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီဇိုင်းအနေဖြင့် FullView ဟူသော အဓိပ္ပာယ်နှင့် လိုက်ဖက်သော ပါးလျကျစ်လစ်သော ကိုယ်ထည် ဖြစ်စေရန် အလေးအနက်ထား ပြုလုပ်ထားပြီး ချောမွတ်တောက်ပြောင်သော ကိုယ်ထည်အသွင်အပြင်ဖြင့် စတိုင်ကျပြီး အထက်တန်းဆန်သော စမတ်ဖုန်းဖြစ်အောင် ဖန်တီးထားပါသည်။
မကြာသေးမီက 5G ကွန်ယက်အတွက် ခြေလှမ်းသစ်အနေဖြင့် In-Display fingerprint နည်းပညာအကြောင်းကို ထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့သော Vivo သည် V9 တွင် အဆင့်မြင့် နည်းပညာဖြစ်သည့် AI နည်းပညာကို ထောက်ပံ့ပေးထားပါ သည်။ ထို့ကြောင့် သုံးစွဲသူများအနနဲ့ AI Face Beauty၊ AI Smart Engine နှင့် AI Selfie Lighting စသည့် AI နည်းပညာသုံး နောက်ဆုံးပေါ် အင်္ဂါရပ်များပါဝင်သော မိုဘိုင်းဖုန်း အတွေ့အကြုံများကို ရရှိခံစားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Vivo V9 ၏ AI Face Beauty သည် မျက်နှာအသားပေး ဓါတ်ပုံအရေအတွက်ပေါင်း တစ်သန်းနီးပါး၏ အချက်အလက်များ ကို အခြေခံပြီး ပြည့်စုံမှုရှိစေရန် ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ V9 ၏ AI နည်းပညာသည် အသုံးပြုသူ၏ အသက် အရွယ်၊ ကျား၊ မ၊ အရေပြား အခြေအနေ၊ အရောင်အဆင်း စသည်တို့အပြင် ပတ်ဝန်းကျင် အလင်းရောင် အခြေအနေ ကိုလည်း ထောက်လှမ်းပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ဒေသအလိုက် သုံးစွဲသူများ စိတ်ကြိုက် နှစ်သက်သလို ပိုမိုကောင်း မွန်အောင်လည်း ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အခြား AI ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များအဖြစ် AI Selfie Lighting အပါအဝင်၊ algorithm အသွင်ပြောင်းမှုနှင့်အတူ မူလ 2D ဓာတ်ပုံမှ 3D ဓာတ်ပုံအဖြစ် အနုပညာ မြောက်စွာ၊ သဘာဝကျ စွာ ပြုလုပ်နိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ရယူနိုင်ပါသေးသည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် အသုံးပြုသူများ အနေ ဖြင့် ကောင်းမွန်သော အသက်ဝင်သော ဓာတ်ပုံလက်ရာကောင်းများကို ဖန်တီးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းအပြင် V9 ၏ AI သည် ဖုန်း၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ဖုန်းသုံးစွဲသူ၏ အလေ့အထအလိုက် စမတ်ဖုန်း စနစ်များ၊ ဖုန်း၏လုပ်ဆောင်ချက်များကို အကောင်းဆုံး ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကူညီထောက်ပံ့ပေးပါသေးသည်။
Vivo ၏ လွန်ခဲ့သော မျိုးဆက်ထုတ်ကုန်ဖြစ်သော မျက်နှာဖြင့် ဖုန်းလော့ခ်ဖွင့်ခြင်း နည်းပညာကို AI Face Access အဖြစ် တိုးမြှင့်လိုက်ပါသေးသည်။ သဘာဝ အသားအရေ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှင့် မျက်နှာလှုပ်ရှားမှု စသည်တို့ကို ထောက်လှမ်းသော ကြောင့် ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ ပြသပြီး ဖုန်းကို လော့ခ်ဖွင့်ခြင်းမျိုး မဖြစ်နိုင်သလောက်နီးပါး လျော့ကျသွားသည်။ V9 AI Attention Sensing မှာလည်း သင်ဖုန်းကိုကြည့်နေသည့် အချိန်တစ်လျှောက်လုံး အဝင်ခေါ်ဆိုမှုများ၊ နှိုးစက်များ(alarms)၊ စာတိုဝင်ရောက်မှုများ(sms) အချက်ပြအသံ(notification)များကို အလိုအလျောက် လျော့ချပေးမည်ဖြစ်သည်။
“အသုံးပြုသူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ဖုန်းကင်မရာနဲ့ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အလွယ်ကူဆုံး အကောင်းဆုံး ရိုက်ချက် တွေရိုက်ယူချင်တဲ့ လိုအပ်ချက်ကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လောက်ထိ နားလည်သိရှိတယ်ဆိုတာကို V9 က ကိုယ်စားပြု ပြသနေပါတယ်။ ငယ်ရွယ်တဲ့ သုံးစွဲသူတွေဆီကို V9 ရဲ့ AI စွမ်းအင်တွေ ပို့ဆောင်ပေးရတာ အရမ်းပဲ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်ရ ပါတယ် ” ဟု Vivo Mobile Myanmar Co., Ltd ၏ Digital PR Manager ဖြစ်သူ ဦးထွန်းထွန်းဝင်း ကပြောကြားခဲ့သည်။
‘ AI ကို အဓိက သော့ချက်အဖြစ် အသုံးပြုအားထားထားပြီး သုံးစွဲသူတွေကို အကောင်းဆုံး စိတ်ဝင်စားမှုတွေ၊ စိတ်ကြိုက် ဖန်တီးနိုင်မှုတွေ ပေးစွမ်းနိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ပါတယ်။အသုံးပြုသူတိုင်းဟာ အချိန်မရွေး၊ နေရာ မရွေး အခြေအနေ အမျိုးမျိုးမှာ ကိုယ့်ရဲ့ အကောင်းဆုံး ပုံရိပ်တွေကို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ရယူပြီး ပြန်လည် ဖော်ပြနိုင်ပါပြီ။ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ရိုက်ချက်ကို အလွယ်ကူဆုံး၊ အသက်သာဆုံး ရရှိတာတင်မကဘဲ FullViewTM Display ကြောင့်လည်း ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အမြင်ကို ရယူခံစားနိုင်ပါပြီ ”ဟု ဦးထွန်းထွန်းဝင်းက ဆက်ပြောသည်။
V9 ကို Pearl Black နှင့် Gold ဟူ၍ အမျိုးအစား(၂)မျိုးကို [Price] ဈေးနှုန်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။
နောက်ဆုံးပေါ် အဆင့်မြင့် နည်းပညာကို အသုံးပြုပြီး ပြီးပြည့်စုံသော အသံအရည်အသွေးနှင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမှုကို သုံးစွဲသူ များအား အလေးထားမိတ်ဆက်ပေးနေသော ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ စမတ်ဖုန်း အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သော Vivo သည် လူငယ် သုံးစွဲသူများအတွက် ဆန်းသစ်ကွန့်မြူးပြီး စတိုင်ကျသော ထုတ်ကုန်များ ဖန်တီးထုတ်လုပ် ပေးလျက်ရှိပါသည်။ Vivo သုံးစွဲ သူအရေအတွက်ပေါင်းမှာ ယခုဆိုလျှင် သန်း(၂၀၀)ကျော် ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာအနှံ့တွင် လူငယ်များ အနှစ်သက်ဆုံး အမှတ် တံဆိပ် တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ FIFA World Cup™ ကိုလည်း တရားဝင် ထောက်ပံ့ပံ့ပိုးပေးထားသော Vivo အနေနှင့် လူငယ်များကို မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိရှိ ဖော်ပြနိုင်ပြီး တက်ကြွအားပြည့်သော ဘဝနေထိုင်မှု ပုံစံတစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်ရန် နည်းပညာ၏ အားပေးလှုှ့ဆော်နိုင်မှုက အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ကြောင်းကိုလည်း ယုံကြည်လက်ခံထားပါသည်။Vivo ၏ တီထွင်ဆန်းသစ်သော စမတ်ဖုန်းများအကြောင်း အသေးစိတ် ပိုမိုသိရှိလိုပါက http://www.vivo.com တွင် ဝင်ရောက် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
LycaLyca CommunicationsLyca Company LimitedMyanmarMyanmar PR AgencyPRPublic RelationsTeam LycaVivoVivo MyanmarVivo V9Yangon
Next Next post: First Mercure debuts in Myanmar